Aorian'ny fangatahanao visa amerikana: Dingana manaraka
NY VISA US ELIGIBILITY
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena britanika
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena espaniola
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena frantsay
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena italiana
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena japoney
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena Aostraliana
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena portogey
Visa amerikana ho an'ny olom-pirenena holandey
Amerika Visa Application
Fizotry ny fangatahana visa amerikana
Business Travel any Etazonia
Fianarana any Etazonia amin'ny US Visa Online
Fepetra an-tserasera US Visa
Dingana manaraka - Taorian'ny US Visa Online
Tsy maintsy mahita an'i New York
Tsy maintsy mahita an'i Seattle
Tokony hahita an'i Los Angeles
Tokony hahita an'i Chicago
Tokony hahita an'i San Francisco
Tsy maintsy mahita Maui Hawaii
Tsy maintsy mahita an'i San Diego
Tsy maintsy mahita an'i Texas
Tsy maintsy mahita Las Vegas
Torolàlana mankany amin'ny tranombakoka tsara indrindra any Etazonia
Torolàlana momba ny dia mankany amin'ireo tranombakoka malaza any New York
Torolàlana momba ny dia mankany amin'ny valan-javaboary malaza
Tantaran'ny Statue of Liberty
Toerana Sarimihetsika ambony indrindra any Etazonia
Nisokatra indray ny sisin-tanin'i Etazonia miaraka amin'i Kanada sy Meksika
Mitsidika an'i Kalifornia amin'ny alalan'ny US Visa Online
Mitsidika Hawaii amin'ny US Visa Online
Tsidiho ny Las Vegas amin'ny alalan'ny US Visa Online
Aorian'ny fangatahanao US Visa Online: Dingana manaraka
Inona ny manaraka aorian'ny famitana sy fandoavana ny vidin'ny ESTA US Visa?
Tsy ela dia hahazo mailaka avy aminay ianao manamafy Vita ny fampiharana satan'ny fampiharana ESTA US Visa anao. Hamarino tsara fa jereo ny mailaka na mailaka mailaka ao amin'ilay adiresy mailaka nomenao tamin'ny taratasy fangatahana ESTA US Visa. Indraindray ny sivana spam dia mety manakana ireo mailaka mandeha ho azy avy Visa US ESTA indrindra ny id mailaka orinasa.
Ny ankamaroan'ny fampiharana dia voamarina ao anatin'ny 24 ora aorian'ny nahavitany. Ny fampiharana sasany dia mety maharitra ela kokoa ary mitaky fotoana fanampiny amin'ny fanodinana. Ny valin'ny ESTA anao dia halefa ho azy ao amin'ilay adiresy mailakao ihany.
Zahao ny laharan'ny pasipaoronao
Koa satria mifandray mivantana sy elektronika ny pasipaoro ny ESTA US Visa, zahao fa ny laharana pasipaoro tafiditra ao amin'ny mailaka fankatoavana ESTA US Visa dia mifanitsy amin'ny isa ao amin'ny pasipaoronao. Raha tsy mitovy dia tokony hirotsaka indray ianao.
Raha diso ny laharana pasipaoronao, dia mety tsy ho tafiditra amin'ny sidina mankany Etazonia ianao.
Mety tsy hahita afa-tsy amin'ny seranam-piaramanidina ianao raha diso.
Tsy maintsy mangataka Visa ESTA US indray ianao.
Miankina amin'ny toe-javatra misy anao dia mety tsy ho azo atao ny mahazo US ESTA amin'ny minitra farany.
Raha te-hanavao ny adiresy mailaka ianao amin'ny fifandraisana, alao antoka fa hifandray birao fanampiana visa na andefaso mailaka izahay amin'ny info@official-us-visa.com.
Raha ekena ny Visa ESTA US anao
Handray an Fanamafisana ny fankatoavana visa an'i ESTA US mailaka. Ny mailaka fankatoavana dia misy ny Status ESTA, Laharana fampiharana ary Daty famaranana ESTA nalefan'i Fiarovana amin'ny fadin-tseranana amerikana (CBP)
Mailaka fankatoavana ESTA US Visa misy fampahalalana avy amin'ny US Customs and Border Protection (CBP)
ny Ny ESTA na ny fahazoan-dàlana momba ny dia dia mifamatotra ho azy sy elektronika amin'ny pasipaoro izay nampiasanao tamin'ny fangatahanao. Hamarino tsara fa marina ny nomeraonao ary tsy maintsy mandeha amin'ny pasipaoro iray ihany ianao. Takiana aminao ny hanolotra ity pasipaoro ity amin'ny mpiasan'ny zotram-piaramanidina sy Mpiadidy ny ladoany sy ny fiarovana ny sisintany nandritra ny fidirana tany Etazonia.
Ny ESTA US Visa dia manan-kery hatramin'ny 2 (roa) taona hatramin'ny daty namoahana, raha mbola manan-kery ny pasipaoro mifandraika amin'ilay fangatahana. Azonao atao ny mitsidika an'i Etazonia mandritra ny 90 andro mandritry ny fizahan-tany, fizarana na orinasa amin'ny US ESTA. Mila mangataka ianao mba hanitarana ny fahazoan-dàlana elektronika raha te hijanona ela any Etazonia ianao.
Azo antoka ve ny hidirako any Etazonia raha nekena ny visa ESTA US ahy?
The Rafitra elektronika ho an'ny fanomezan-dàlana momba ny dia (ESTA) fahazoan-dàlana na visa mpitsidika manan-kery, aza manome antoka ny fidiranao any Etazonia. ny Ny mpiasan'ny fadin-tseranana amerikana sy ny fiarovana ny sisintany (CBP) dia manana ny zony hanambara anao ho tsy azo ekena noho ireto antony manaraka ireto:
Nisy fiovana lehibe teo amin'ny toe-javatra iainanao
Nahazo vaovao vaovao momba anao
Inona no ataoko raha tsy ekena ao anatin'ny 72 ora ny Fampiharana ESTA US Visa?
Raha ny ankamaroan'ny visa ESTA US dia avoaka ao anatin'ny 24 ora, ny sasany mety maharitra andro maromaro handaminana azy. Amin'ny tranga toy izany, ny fampahalalana fanampiny dia mety takiana amin'ny fadin-tseranana amerikana sy ny fiarovana ny sisin-tany (CBP) alohan'ny fankatoavana ny fangatahana. Hifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka izahay ary hanoro anao ny dingana manaraka.
Ny mailaka avy amin'ny US Customs and Border Protection (CBP) dia mety misy fangatahana:
Fanadinana ara-pitsaboana - Indraindray dia takiana ny fizaham-pahasalamana mba hitsidika an'i Etazonia
Fanamarinana momba ny heloka bevava - Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, ny birao Amerikanina Visa dia hanakaiky anao raha toa ka takiana taratasy fanamarinana polisy na tsia.
Interview - Raha mihevitra ny tompon'andraikitra misahana ny ladoany sy ny sisintany (CBP) amerikana fa ilaina ny tafatafa mivantana dia ilaina ny mitsidika ny kaonsily na masoivoho amerikana akaiky indrindra anao.
Ahoana raha mila mangataka Visa ESTA US hafa aho?
Raha te-hisoratra anarana ho an'ny mpianakavy na olon-kafa miaraka aminao dia ampiasao ny Fangatahana fangatahana visa any Etazonia ESTA indray.
Ahoana raha holavina ny fangatahako ESTA?
Raha toa ka tsy ekena ny US ESTA anao dia hahazo famotehana ny antony fandavana ianao. Azonao atao ny manandrana mandefa Visa mpitsidika amerikana nentim-paharazana na taratasy any amin'ny masoivohon'i Etazonia akaiky anao.
Fampahalalana ESTA US Visa
Zavatra tokony hatao any Etazonia
LOHATENY mankany Canada?
Mety mila eTA Canada Visa ianao.
US VISA APLIKASI
FIRENENA AZO ATAO VISA ONLINE US
FISOROHANA NY VISA US
FITAKY VISA ONLINE US
TRAVEL BUSINESS ANY US VISA ONLINE
MIANATRA ATO Etazonia amin'ny VISA ONLINE
AFTER US VISA ONLINE- DINGANA MANARAKA
FAQ US VISA
Tari-dalana ho an'ny tranombakoka tsara indrindra any Etazonia
MUSEUMS malaza amin'ny NEW YORK
MITAROTRA AMIN'NY KARAZAM-PIRENENA malaza
TOROHEVITRA HO AN'NY SArivongan'ny fahafahana
PARKS LOHAHEVITRA INDRINDRA ATO Etazonia
TOERANA FIVORIANA TOP ATO Etazonia
TSY MAINTSY MITADIAVA NY Toro lalana
TSY MAINTSY HITA NY YORK Vaovao
TSY MAINTSY MAHITA SEATTLE
TSY MAINTSY HITA NY ANJELY KOA
TSY MAINTSY MAHITA CHICAGO
TSY MAINTSY MAHITA SAN FRANCISCO
TSY MAINTSY HITA SAN DIEGO
TSY MAINTSY HITA TEXAS
Disclaimer: Ny VISA elektronika amerikana navoakan'ity tranokala ara-barotra ity dia ampiharina mivantana amin'ny tranokalan'ny US Customs and Border Protection. Ny US Customs and Border Protection (CBP) dia tsy nanendry ny www.us-visa-online.org mivantana, ankolaka na manokana. Ny sarany matihanina dia voafantina ho an'ny serivisy ataonay ary ny Visa Levy ho an'ireo izay mihatra amin'ity tranokala ity.